Ndeapi anonhuwirira anonyanya kushandiswa muIndia? | Absolut Kufamba
Nyika yezvinonhuwira inoyevedza. Ini ndinoda kuvhura kicheni yangu yekabati uye kunhuwidza zvinonhuwira zvakasanganiswa zvemakumi emidziyo yandinochengeta imomo, asi ndinoziva kuti haigoni kufananidzwa ne zvinonhuwira zvinoshandiswa muIndia.
Iyo inonhuwirira sei inofanirwa kuve chikafu chemhuri yeIndia! Muromo wangu uri kudiridza uchingofunga nezveavo mavara uye hwema ... Unofarira iyo indian cuisine? Nekudaro, isu tichave tichiziva nhasi uno ayo ari mhando dzinonyanya kushandiswa muIndia.
1 India nenyika yayo inonhuwirira
4 Cassia kuhukura
5 Pepper nhema
8 Nutmeg uye mace
9 Mbeu yemasitadhi
10 Fenugreek kana fenugreek
India nenyika yayo inonhuwirira
La indian gastronomy Iyo inoshandisa makumi ezviuru zvezvinonhuwira, ivhu uye isina kukomberedzwa, yega kana musanganiswa nevamwe, saka zvinogona dzimwe nguva kutyisidzira kushinga kugadzira dhishi reIndia kumba. Asi kana iwe uine zvishoma maitiro uye uchikwanisa kuzviziva, unenge watove wakasvika kure nzira.
Nyanzvi mune chikafu cheIndia vanodaro pane zviriko 11 zvinonhuwira zvinoshandiswa zvakanyanya muIndia chikafu. Mazhinji anoshandiswa yakaoma uye yakashambiswa kuitira kuti vagone kuburitsa maoiri avo akakosha vasati vadzikwa vobva vawedzerwa mumubatanidzwa nezvimwe zvinonhuwira.
Kunyangwe iko kushandiswa kwedhaka kuri kwekare, nhasi zviri nyore uye zvinokurudzirwa kushandisa robhoti rekicheni kuti uwane kugaya kwakanaka kwazvo. Ndizvozvo here zvimwe zvinonhuwira, semuenzaniso cassia bark, yakaoma kwazvo uye ine dhaka zvakaoma kuikuya.
Kudzidza nezvezvinonhuwira kwakakosha nekuti kushandura nzira yako yekubika kunogona kuita kuti mhando ive nehumwe hwakasiyana, kana nenzira imwecheteyo, kuiisa pane imwe nzvimbo mukugadzirira ine zvimwe zvinokanganisa.
Zviripachena kuti kune mamwe akawanda marudzi, makumi mana, kwete gumi nerimwe chete, asi mamwe haawanike kana anoshandiswa chete mune mamwe matunhu, semuenzaniso, dombo rebwe. Nekudaro, isu tinogona kutarisisa kaboka kezvinhu makumi maviri nezviviri zvakakosha zvinonhuwira zvinoonekwa mukati mechikafu cheIndia uye mutsika dzekudyira dzemazana emakore apfuura, uye kubva ipapo tinogona kugadzira rimwe boka 11, yakanyanya kushandiswa.
heyi miviri miviri yekadhiamamu ayo anoshandiswa muIndia gastronomy: girini uye nhema. Green ndiyo yakajairika uye inoshandiswa zvakanyanya musanganiswa yezvinonhuwira uye mune akajairika madhiri. Green cardamom ine mwenje, inotapira kuravira, ine nyoro eucalyptus chinyorwa. Inogona kusanganiswa yakazara kana ichigadzirwa musanganiswa, senge mune yakasarudzika garam masala. Zvakare, kana uchiishandisa mumadhizeti uye zvihwitsi, mbeu yakavhurika inogona kushandiswa.
Nhema kadhiamamu yakanyanyisa uye inosvuta uye ehe kana hongu unofanirwa kuishandisa nehanya. Mbeu shoma dzinoshandiswa uye kana ukashandisa poda yese unofanirwa kuibvisa usati washandisa ndiro nekuti kana ukairuma, kunaka kwangu.
Iyo zvakare yakasarudzika mhando, ine mhepo yeanise, inozivikanwa zvikuru muIndia ndiro. Iko kunhuwirira uye kunhuhwirira kunobva mumafuta ayo akasimba akakosha, angangoita ekurapa. Clove iruva uye maoiri aro anodzvanywa nekubviswa asati ashandiswa mukubika.
Inogona zvakare kushandiswa izere kana kusanganiswa nezvimwe zvinonhuwira uye haufanire kunyatso chenjera nekuti vakapfava. Iyo yakasarudzika karavha ndiro Kerala Kokonati Curry Chicken.
Iyo inozivikanwa zvakare se china sinamoni, kunyange sinamoni yakasiyana. Kasiya zvinodhura kugadzira Uye chaizvo, sinamoni yepasi yaunowana inogadzirwa chaizvo kubva kucassia bark.
MaIndia anoshandisa kasiya panzvimbo yesinamoni pakubika, vachitora mukana wekunaka kwayo, uye vanoishandisa yakawanda. Inogona zvakare kushandiswa zviyo kana ivhu uye yakasanganiswa nevamwe. Iyo ine kuomarara kusingagumi kupfuura sinamoni uye zviri nyore kutarisa kana iri nyowani kana kuti kwete: kana iwe uchizora iyo pakati peminwe yako unofanirwa kukwanisa kunhuwidza kunhuwirira kwesinamoni kana iri nyowani.
Mughlai paneer curry inogadzirwa necassia crust.
Ndinoda mhiripiri nhema. Inowanikwa kuIndia, kubva kumatunhu eMalabar neWestern Ghats. Ichokwadi ndechekuti icho chinonhuwira icho zvinoda zvakawanda kukura nekuti zvinoenderana zvakanyanya nezvakasikwa uye kutenderera kwayo. Ndokusaka iine mitengo iyo inogara ichisiyana.
Pepper nhema inofanira kukangwa usati washandisa uye nguva dzose, nguva dzose, zvirinani kuve nazvo muzviyo nekukuya zvishoma usati waishandisa. Izvo zvakanaka paIndia chili huku.
Ini ndinoda kumini, kunyanya se marinade yemombe pasi. Cumin inoshandiswa muIndia izere kana yakasanganiswa nezvimwe zvinonhuwira uye inoshandiswa kupa iyo toni inoputa kune akawanda maIndia madhishi. Mbeu dzayo dzakasviba uye dzinonhuwirira kwazvo.
Zvirinani kushandisa kumini nyowani kana tichida kuwedzera kwakanyanya kunhuhwirira. Inopisa zviri nyore, saka chenjera kana uchiigocha. Kana yapfuurwa, kumini inovava. Iyo inokodzera masekondi makumi matatu echiedza chechiedza uye wozobvumira kutonhora usati washandisa.
Iyo ndeimwe yemhando yekare kwazvo inozivikanwa pasi rose, iine yayo ruvara rwegoridhe, kunaka kwayo kwakati citric uye kuumbwa kwayo kwakashata. Mbeu dzeCoriander dzinoshandiswa sehwaro hwezvakawanda zvezvinonhuwira, asi poda yekorianderi ndiyo imwe yemhando dzinonyanya kushandiswa mumadhishi eIndia.
Sezvazviri mune kumini, iwe unofanirwa kushambidza mbichana zvishoma kusvikira yendarama brown uye mhodzi dzinotanga kusvetuka zvishoma mupani. Chicken Tikka Masala ndeyekare.
Nutmeg uye mace
Ose ari maviri anoshandiswa zvakanyanya muIndia gastronomy. Iyo nyowani nyowani inogadziriswa kubvisa kunze uye kubvisa kupfeka. Iyo yekunze yekunze inovhara mbeu inogona kutyoka isati yaita grating uye yova mace. Ndokunge, mace igobvu reiyo nutmeg.
Kana yaoma, inowana mumvuri pakati pegoridhe neorenji uye inowedzera inodziya uye inotsvedzerera kuravira. Kune rimwe divi, kana iyo nutmeg yaoma inogara kwenguva yakareba saka zvinogara zvichikurudzirwa kuitenga muzviyo uye kuibaya yakananga mundiro kana mukugadzirira.
Izvo zvisingawanzo kushandisa nutmeg yatove ivhu nekuti kana ichinge yakakwenenzverwa inorasikirwa nemasimba, saka nei? Nyama ine massaman curry ine nutmeg.
Mbeu dzinogona kuve nhema, shava kana yero uye dzinotengeswa zvakanyanya muIndian chili. Mbeu dzinopa kuravira kwadzo kana dzakagayiwa kana kubikwa mumafuta. Ivo kuravira sekuputa uye anoshandiswa zvakanyanya mumakirari uye ma curry mapoda.
Zvakare, oiri yemasitadhi inoshandiswa zvakanyanya muNorth Indian cuisine.
Fenugreek kana fenugreek
Ndiyo mhando iyo isingashaikwe muMadras curry poda. Iyo yakanyanya hunhu hwekunhuwirira kwayo uye kuravira. Mbeu dzemuti uyu dzakatsvukirira uye dzakaomeswa uye dzinoshandiswa semunhuwi, unowanzonzi kasurimethi.
Mbeu idzi dzakanyanya kwazvo saka unofanirwa kungwarira nekushandisa kwavo, sekune mavhavha. Iyo inoshandiswawo mukurapa kwechinyakare uye mune yekunyepedzera maple manyuchi anowanikwa muIndia.
Inowanzoitika muIndia, inogona kushandiswa nyowani kana kuomeswa. Iyo ine zvakawanda zvakanaka zvehutano uye inoshandiswa mumakari uye mune akawanda akasiyana spice musanganiswa. Iine flavour iyo yakasimba patsva pane yakaoma uye tsvina zvakakwana, saka unofanirwa kuchenjera kana uchiibata.
Ine hwema hunonhuwa, hwevhu uye hunoshandiswa muzvishoma kupa ma curries avo vakapfuma ruvara rwegoridhe. Bhruji mazai ane turmeric mavari.
Isu tatoziva, ndiyo mhando inodhura kwazvo pasi rose. Iyo yakakosha kupfuura goridhe pahuremu hwayo uye kana iwe uri kushamisika kuti nei, zvinongova nekuti zvinotora basa rakawanda kugadzira. Saffron pane iyo stigma yemaruva esafron uye inofanirwa kukura nemaoko.
Iyo safironi yakanakisa yakadzika yakatsvuka uye inouya kubva kuSpain, Iran kana Kashmir. Iyo inotonhorera iyo, iyo yakadzika iyo tsvuku hue iri. Iyo ine yakasarudzika flavour, asi hwema hunosiyana zvinoenderana nemhino yeumwe neumwe. Kune vamwe icho chinhu chine maruva, kune vamwe chine mazano ehuchi ... Zvisinei, safironi yakasimba uye inoshandiswa mune zvidiki zvidiki. inowanzo nyungudika kutanga mumvura kana mukaka.
Unoshinga kutamba neizvi indian zvinonhuwira mukicheni mako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Ndeapi anonhuwirira anonyanya kushandiswa muIndia?